Imaaraadka oo qorshe wayn ka damacsan magaalooyinka Berbera & Jigjiga | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imaaraadka oo qorshe wayn ka damacsan magaalooyinka Berbera & Jigjiga
Imaaraadka oo qorshe wayn ka damacsan magaalooyinka Berbera & Jigjiga
(Dubai) 20 Abriil 2019 – Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa qorshaynaya inuu deked qallalan oo qaadkeedu ballaaran yahay ka sameeyo meelo ka tirsan Geeska Afrika iyo guud ahaan Bariga Afrika oo uu ugu horreeyo dalka Itoobiya.
Suhail Al Banna, oo ah Agaasimaha Guud ee DP World ee Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa sheegay inay iminka daraasadaynayaan dhismaha xarun wayn oo konteenarrada la dhigo, iyagoo sheegay inay ballaarinayaan howlaha dekedda Berbera 3-da bilood ee soo aaddan.
Imaaraadka oo markii ay la wareegayeen dekedda Berbera horay u sheegay in uu damacsan yahay inuu kaabayaal dhanka rarka iyo dejinka ka dhiso Itoobiya ayaa iminka diiradda ku haya magaalada Diri Dhaba.
Imaaraadka ayaa doonaya inay qorshahan ku xiraan midka Berbera Corridor, oo ay sheegeen inay ka dhigayaan midda ugu wayn Geeska Afrika isla markaana dejin karta badeecooyinka ka imanaya Bariga Fog, Yurub iyo Badda Cas.
Suhail Al Banna ayaa sheegay in goobaha ay dersayaan ay ka mid yihiin magaalada Jigjiga ee caasimadda Gobolka Soomaalida ee Itoobiya.
Previous articleGabar Soomaaliyeed oo lagula kacay CUNSURIYAD aysan ka cabanin! (Akhri sheekadan)
Next articleDAAWO: Malliishiyo HUBAYSAN oo kasoo baxday Maraykanka & digniin loo diray + Sawirro